Ihowuliseyili Pet Portion Cup yoMvelisi kunye noMthengisi | ICopak
Enokuphinda isetyenziswe; yenziwe nge-premium-quality polyethylene terephthalate (PET)
Veza nantoni na ukusayina iikomityi zeziqhamo, ukungcamla iikomityi kwisosi ekhethekileyo ye-shrimp.
IiCOPAK INDAWO YOKUFUTSHWA KWETET Ukucaca kunye nokugquma kwesivalo esihle kongeza isandi sazo zonke iintlobo zeminikelo yemenyu.
Iplastiki Isahlulo sePET iikomityi zilungele ukukhonza iisosi, iincinithi, iilokhwe kunye novavanyo lokungcamla.
Yenziwe nge-crystal ecacileyo, eqinile i-PET eyomeleleyo kwaye ibonisa iimveliso zakho ngokusemandleni.
Abanye Indebe yesahlulo sePET ngobukhulu bokuthengisa obushushu:
ICANDELO LE-PET PORTION (SAUCE)
Ububanzi obuphezulu cm
ubungakanani (Phezulu * Btm * H) cm
Yangaphakathi / ibhokisi
I-12Oz / 330ml
Ukhetho olugqibeleleyo lokuThathwa, ukuHanjiswa kunye neeNdawo zokutya
Ukuhlangula ngokulula kuyazingca ngokubonelela ngemveliso yenkonzo yokutya kunye neemveliso zepremiyamu ngexabiso elikhulu.
Ukongeza kukhuseleko, womelele, kwaye unokwethenjelwa, uluhlu lweemveliso zeCOPAK luzinzile, zinokuphinda zisebenze, kwaye zinokuphinda zisetyenziswe xa kunokwenzeka kwaye kufanelekile.Ukuphucula ishishini lokutya-ukutya kwinqanaba elitsha lomgangatho, Xa ujonga uphawu onokuthi uthembele, khetha iShanghai COPAK.
Ngelixa iisosi, idiphu, kunye namacala agqibezela amava amnandi edinning, COPAK Iindebe zePET kwaye isiciko sigqibe iimfuno zenkonzo yokutya yokuhanjiswa kwempahla. EyethuIindebe zePET Ubunzima bokukhanya kulwakhiwo lwezinto eziphathekayo, ukuhlala ixesha elide, ubungqina bokuqhekeka, ioyile kunye namanzi kunye ne-eco friendly.
Ngeentlobo-ntlobo zee-condiments kunye namacala, yitya okanye uphume,Iindebe zePET ikunike inkululeko yokusebenzela ngokulula amacala afanelekileyo okanye isahlulo.
Sineqela elikhethekileyo lolawulo lomgangatho, izinto ezikhethiweyo zokukhetha isebe kunye nabantu bokuhlola umgangatho. Kwaye oku kuya kunciphisa izikhalazo kubaxhasi bakho.
Iimpawu ezishushu: I-PET PORT CUPS, i-eco-friendly, indebe ecacileyo, thatha indebe yethu ye-PET
Egqithileyo Isitya sesaladi seplastikhi
Okulandelayo: INdebe ye-Sauce yePET
Indebe yePET 20oz
China Umthengisi wendebe ye-PET
Ezilahlwayo iikomityi zeplastiki kunye logo